သည်ကနေ.ကျွန်မဖြစ်နေသမျှ နောင်တစ်နေ.ကျွန်မဖြစ်ဖို. မျှော်မျန်းနိုင်သမျှ အားလုံးပင် အမေ့ကျေးဇူးချည်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
my fri..,ကျွန်မ လေ စိတ်ညစ်တယ်ကွယ်.... ကျွန်မနောက်ကျနေပြီလားဟင်..... ကျွန်မထင်နေတယ် everything make me cry. ဒီနေ.တော.တော.ကို စိတ်ဓာက်ကျတယ် ကွယ်.. ဘာလို.ကျရ မှာလဲနော် ..... ကျွန်မမှာ အမေ၊အဖေ ရော အစ်မပါ ရှိ တာပဲ့နော်.... ဟဲဟဲ..စတာပါ။ဒါပေမဲ့...အဲဒီအချိန်တုံး ကစိတ်ညစ်နေတာအမှန်ပဲဟာ.....။ အခုတော့ပျောက်သွားပါပြီ....။ သူငယ်ချင်းတို.လည်း စိတ်ညစ်မူအပေါင်းမှ ကင်းဝေးနိုင်ပါစေကွယ်....။ လိုရာဆန်ဒများ ပြည့်ဝပါစေ ကွယ်....။ KhinNandarWin(A Nge Ma)
Posted by A nge ma at 8/16/2007 06:33:00 PM No comments: Links to this post
ဟဲ ....ဟဲ....။ကျွန် မက လူ.ပြည်ရောက် လာတာ၁၈ နှစ်ပြည်.တော.မှာဆိုတော.လူတွေအကြောင်းတော်တော်တော. သိ လာပြီပေါ. နော်.....။လူတွေဟာ အမျီုးမျီုးရှီ တယ်နော်။ တချို.ကျတော. သူတို.ရဲ. တန်ဖိုးရှိလှတဲ.အချိန်တွေကို မာနတွေ ၊အတ္တတွေနဲ.ပဲ.အချိန်ကုန်ခဲ.ကြတယ် နော်။တချို.ကျတော.လည်း သူ.ရဲ.အချိန်တွေကို သူ.အတွက်ထာဝရပါအောင် ယူသွားခဲ. ကြတယ်နော်။ဒီလိုလူမျိုး တွေက တော.ကောင်းတာပေါ.နော်...သူတပါးတွေကို ဘယ်လိုနည်းနဲ.မှ ဒုက္ခတွေပေးလေ.မရှိပါဘူး....။ဘယ်လိုဘဲ.ဖြစ်ဖြစ် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ကူညီပြီးနေသွားရင် ကောင်းမှာပဲ.နော်.....။ကျွန်မလည်းကူညီရတာဝါသနာပါပါတယ်။ KhinNandarWin(A Nge Ma)
Posted by A nge ma at 8/16/2007 05:43:00 PM No comments: Links to this post
ေ၇ကလေ ကြီးလာတော့ လည်း ကြောက်စရာကြီးပါ လားနော်။ 30 ရက်နေ.ကရေစကြီးတာ တစ် နေ.ထဲနှင်.ကျွန်မတို.အဆောင် ရေမြှုပ် သွားတယ် လေ။ ရေကြီးတယ်ဆိုတာ ရှေးက အဆိုအရ ကပ်ဆိုက် တယ် လို.ဆိုရ မှာလားမသိ ဘူးနော်....။ ကျွန်မက တောင် ပေါ် မှာနေ တယ် ဆို တော.ရေ ကြီးတာ တစ်ခါမှမမြင်ဘူးတော. ကြောက် သွားတာပေါ.နော်....။ ကျွန်မတို. အဆောင် က အစ် မ ပြော တာက တော. ၃နှစ်တစ် ကြိမ် ရေကြီး တယ် လဲ. လေ။ နောက် ထပ် ရေမကြီးဖို.ဆုတောင်းပါတယ်နော်။ ဒီရေကြီးလိုက်လို.ကျွန်မတို. ကျောင်း ၂ ပတ် ပိတ် လိုက်ရတယ် လေ။ ပိတ်ပြီးပြန်ဖွင်.တော.လည်း ဆရာ/ဆရာမ တွေက စာ တွေ ကို တပုံ ကြီးသင် နေ တယ် လေ....။လိုက် လို.ကိုမမှီတော.ဘူး..။ရေ မကြီးခင်က စာတွေကိုနဲနဲလေးဘဲသင် ပြီးအခုမှတပုံကြီးသင်လိုက်တော.ဒုက်ခ ရောက်သွားတာပေါ.နော်.......။ KhinNandarWin(A Nge Ma)
Posted by A nge ma at 8/13/2007 12:07:00 PM No comments: Links to this post
ကျွန်မရဲ. blog ကသိပ်ပြီးတော. attractive မဖြစ်ဘူးနော်။ ကျွန်မကြိုးစားနေတုန်းမို့ပါ။ဘာမှလည်း မပါဘူးနော်။ကျွန်မ ကြိုးစားပြီးဖြည့်ပါ့မယ်။ KhinNandarWin(A Nge Ma)
Posted by A nge ma at 8/13/2007 11:59:00 AM No comments: Links to this post
ဒီ နေ့ဟာကျွှန်မ ရဲ. blog ကို စရေးတဲ.နေ. ဖြစ် ပါ သည် ရှင်.။ သူငယ်ချင်း တို. မင်္ဂလာ အပေါင်း နှင်. ပြည်. စုံ ပါ စေ လို. ဆု တောင်း ပေး လိုက် ပါ တယ် ရှင်.။ သူငယ်ချင်းတို.အတွက် စကား စု..... `ကိုယ့် ကိုယ်ကို ခိုင်း မခိုင်းရင် သူများ ခိုင်း တာခံ ရ မယ်´ တဲ.။ ဒီစကားစု ဟာ now time မှာကျွှန်မကိုအလွန်လာထိရောက် နေ တဲ့ စကားစု ဖြစ် ပါတယ်ရှင်.။ ဘာကြောင်.လဲဆိုတော. ငယ်ငယ်ကတည်း မှအခုချိနထိ် အမေ ကကျွှန်မရဲ.ရှေ. မှနေပြီးသံ မဏိတံတိုင်း လို ကာ ကွယ် ပေး နေတဲ.အတွက် ကြောင့် ဘာမှ မသိခဲ. လို. အခု ချိန် မှာမှလာ သိ ရ တဲ. အ တွက် ကြောင်.လောကကြီးကို ကြောက် သလို မျိုး ဖြစ် လာ ခဲ့ပါပြီရှင့်။ ဒါပေမဲ့ ကျွှန်မ လည်း လူ တစ် ယောက် ဖြစ် လာ မှ တော့ ဘာဖြစ် လို. ကြောက် ရ မှာ လည်း နော်။ မ ကြောက်ပါ ဘူး စတာပါ ။ ဒါ ပေမဲ. အပေါ် က စကား စု ကတော့ သူ ငယ် ချင်း တို. အ တွက် ပထမဦး ဆုံး လက် ဆောင်အဖြ စ် ပေး လိုက် ပါရ စေရှင့်။ KhinNandarWin(A Nge Ma)
Posted by A nge ma at 8/09/2007 10:37:00 AM No comments: Links to this post
ရေးခဲ့ပေးပါ comments တွေလေ.......
ခုချိန်ဟာ (now time) .......
ThiHa's fri (1)
Ma Khin Khin Htun
A nge ma
I amastudent,18 years old,have two siblings and I am younger and have only one elder sister and native of pindaya, southern shan state.